မြန်မာ့သားကောင်း: တာလီဘန်နဲ့ အယ်လ်ကိုင်ဒါကို အားကျနေသလား KIA
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း KIA အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ် များကြောင့် ပြည်သူပိုင်တံတားများ၊ ရထားလမ်းများ၊ ကားလမ်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များ ပျက်ဆီးခဲ့ရပြီး ပြည်သူများလည်း ရင်တ ထိတ်ထိတ်ဖြင့်ခရီးသွားလာ နေကြရပါတယ်။ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများလည်း KIA အဖွဲ့၏ အဓမ္မလူသစ် စုဆောင်းမှုကြောင့် မိမိတို့နေရာဒေသများတွင် နေထိုင်ရဲခြင်းမရှိတော့ပဲ KIA နဲ့ ဝေးရာ မြို့/ရွာများ သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်နေကြရပါတယ်။ အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ပျက်ပြားစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် အစိုးရဌာနများ၊ ရုံးများကိုလည်း မိုင်းထောင်ဖျက်ဆီးခဲ့လျက်ရှိပြီး လူအများထိတ်လန့်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့/ရွာအနှံ့ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ KIA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂမ်ရှောင်မှ မြစ်ကြီးနားမြို့ပေါ်တွင် မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရေး ရနိုင် သလောက်လုပ်ရန် အမိန့်ပေးထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အစိုးရမှ ကမ်းလှမ်းသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်း KIA အဖွဲ့က အကြိမ်ကြိမ်လက်မခံဘဲ တပ်မတော်မှ ထိုးစစ်မဆင်ပဲလုံခြုံရေးသာ ဆောင်ရွက်နေသောကာလများတွင် အင်အားနည်းသော တပ်မတော် စခန်းများကို အဆမတန်သောအင်အားဖြင့် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အရှင်ဖမ်းဆီးရမိသော တပ်မတော်သားများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး အင်တာနက်တွင်လွှင့်တင်ကာ အောင်ပွဲခံခြင်း၊ ကျဆုံးသူ တပ်မတော်သားများ၏ အလောင်းများကြားတွင် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကာ မီဒီယာများမှ တစ်ဆင့်လွှင့်တင်ခြင်း တို့ကိုလုပ်ဆောင်ကာ ဂျနီဖာကွန်ဗန်းရှင်းပါ အချက်အလက်များကို ဖောက်ဖျက်လျက်ရှိ ပါတယ်။
KIA အဖွဲ့၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တာလီဘန်၊ အယ်ကိုင်ဒါ စသောအကြမ်းဖက် အဖွဲ့ အစည်းများရဲ့ လုပ်ရပ်ထက်ပိုပြီး ယုတ်မာတယ်. ရက်စက်ပါတယ်။ တာလီဘန်နှင့် အယ်ကိုင်ဒါတို့ဟာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဗုံးခွဲများသာ ပြုလုပ်သော်လည်း KIA ကဲ့သို့ အမျိုးအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိ၊ သမီးပျိုလေးများအား နိုင်ငံခြားသို့ ရောင်းစားခြင်းလည်းမရှိ၊ လူသားတံတိုင်းဖြင့်လည်း ခေါင်းဆောင် များကို ကာကွယ်ထားခြင်းလည်း မလုပ်ပေ။ KIA၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူသား မျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးမှ လက်မခံနိုင်လောက်သည့် အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဟာ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ သာဓကအနေနဲ့ ပြောပြရရင် အာဖဂန်နစ္စတန်လို တောတောင်ထူထပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှိုဏ်ဂူတွေတူးပြီး ခိုအောင်းနေတဲ့ တာလီ ဘန်တွေကို အမေရိကန်က လေကြောင်းမှ ပေါက်ကွဲအားပြင်းထန်သော ဗုံးများကိုအသုံးပြုပြီး တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်။ အယ်လ်ကိုင်ဒါခေါင်းဆောင် အိုစမာဘင်လဒင်ကို သုတ်သင်နှိမ်နင်းရာမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲထိ ဝင်ပြီး အိမ်ရှင်နိုင်ငံကိုတောင် အသိမပေးဘဲ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အမေရိ ကန်နဲ့ နေတိုးတို့က နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း KIA ၏ လူမဆန်သော အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များကြောင့် ဒေသခံ လူထုနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးက KIA ကို အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ KIA ၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံး စစ်တလင်းဖြစ် ခဲ့ရတယ်။ ဒေသခံတွေဟာ စစ်ဘေး ဒုက္ခသည် များအဖြစ် တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးပွားလာရတယ်။ ဒေသအတွင်းရှိရွာတွေကိုလိုင်ဇာအနီးသို့ ပြောင်းရွေ့ခိုင်းပြီး လိုင်ဇာအား လူသားတံတိုင်းဖြင့် ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ လူမဆန်တဲ့စစ်ရေးဗျူဟာတွေကို ကျင့်သုံးတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ကမ်းကုန်အောင်ရက်စက်သော KIA အား လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် အမြစ်ပြတ် သုတ်သင်ရန် လိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်. လိုလားလျက်ရှိနေပါတယ်။ အစိုးရစစ်တပ်က လေယာဉ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်နေတာတွေကို မီဒီယာတွေက ပုံကြီးချဲ့ပြောဆိုနေတာတွေကိုလည်း မြင်တွေ့ နေ ရသော်လည်း KIA တွေ မျိုးတုံးဖို့ဆိုရင် အစိုးရမှာ အဏုမြူဗုံးသာရှိပါက KIA ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပုံးအောင်းနေတဲ့ နေ ရာတွေကို အဏုမြူဗုံးနဲ့သာ ကြဲချပစ်စေလိုပါကြောင်း ရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။
At 1/16/2013 08:17:00 AM